Shkrub Trano Fonenana - Famolavolana
Trano Fonenana Ny trano Shkrub dia niseho noho ny fitiavana sy ny fitiavana - mpivady feno fitiavana miaraka amin'ny ankizy telo. Ny ADN ny trano dia ahitana ny fitsipika fanao aestetika manorina izay ahitana fitaomam-panahy amin'ny tantaram-pirenena ukrainiana sy kolontsaina nentin'ny fahendrena japoney. Ny singa amin'ny tany ho fitaovana dia mahatsiaro tena amin'ny endriny ara-stratejika ao an-tokantrano, toy ny tafo tany am-boalohany sy ny rindrina tanimanga vita amin'ny lamba sy tsara tarehy. Ny fiheverana ny fandoavan-tena, amin'ny maha-mpanorina azy, dia azo tsapain-tanana manerana ny tokantrano, toy ny kofehy malina tsara.
Anaran'ny tetikasa : Shkrub, Anaran'ny mpamorona : Serhii Makhno, Anaran'ny mpanjifa : Serhii Makhno.
Trano Fonenana Serhii Makhno Shkrub